SlayerAI: Famaritana ireo teny maro samihafa ilainao handresena | Martech Zone
Amin'ny ankapobeny dia dimy imbetsaka ny olona mamaky ny lohateny vakio ny kopia vatana. Rehefa nanoratra ny lohateninao ianao dia nandany valopolo cents tamin'ny dolara.
David Ogilvy, Ogilvy amin'ny doka
Slayer dia faharanitan-tsaina artifisialy (AI) vokatra izay maminavina ny fomba mahasarika ny lohateny amin'ny mpihaino iray. Ohatra, takany izany denim izany daisy andriana dia 15% mahasarika kokoa noho ny denim kilaoty fohy amin'ny tsena lamaody. Ny Slayer dia manodina lahatsoratra mifototra amin'ny toerana hisehoan'ny kopia, manome anao valiny mifanaraka amin'ny fahombiazan'ny mpihaino anao. Ny AI dia miasa amin'ny famakafakana fanentanana sy lahatsoratra an'arivony teo aloha, miaraka amin'ny fahombiazany. Avy eo dia ampiofanina hamantatra raha mahaliana ny lahatsoratra na tsia.
Fandinihana tranga SlayerAI
Ohatra iray amin'ny fampiasana ny Slayer dia mampitombo ny mpanjifa mikasika ny 30% ho an'ny orinasam-panjakana momba ny cybersecurity, OneSpan. Nampiasa an'i Slayer ny OneSpan mba hanamafisana ny andalana lohahevitra mailaka amin'ny famantarana ny permutation tena mahaliana:
Nahoana no zava-dehibe ny SlayerAI?
Tao anatin'ny 3 taona farany dia nisy ny habetsaky ny kopia navoaka nitombo 10x mihoatra.
Ny haben'ny tsenan'ny famoronana votoaty nomerika eran-tany dia antenaina hahatratra 38.2 miliara dolara amin'ny 2030 amin'ny CAGR 12% mandritra ny taona 2020 sy 2030. Noho ny fahatongavan'ny zava-misy virtoaly sy ny faharanitan-tsaina artifisialy, ny fitaovana famoronana votoaty nomerika dia mahita fitomboana tampoka amin'ny fangatahana. mandritra ny vanim-potoana vinavina.
InsightSLICE, Tsenan'ny famoronana dizitaly
Io fitomboana io dia natosiky ny anton-javatra maro — ny fitomboan'ny fiovaovan'ny varotra an-tserasera, ny fiparitahan'ny mpampiasa vaovao tonga voalohany an-tserasera, ary ny fahaizana mamorona kopia miaraka amin'ny AI.
Misy talenta sy fitaovana bebe kokoa noho ny hatramin'izay mba hamoronana votoaty, ary ny fiovan'ny varotra an-tserasera dia mampitombo ny fangatahana kopia… ary mihamitombo izany.
Ny SlayerAI dia manome anao ny fahafahana mifandray amin'ny mpihaino anao amin'ny ranomasina votoaty mora vidy. Miaraka amin'izany dia lasa hery lehibe ny fifandraisana lehibe. Mba hisongadina amin'ny kopiao dia mila mihoatra noho ny fiantohana fotsiny ianao fa manana fitsipi-pitenenana sy tsipelina mety, na manaraka fotsiny ny fomba fanao ara-barotra tsara indrindra, satria ny fiafaran'ny lalao dia ny fahafahana hihaona amin'ny mpihaino anao amin'ny akany.
Amin'izao fotoana izao, voavaha amin'ny alalan'ny fandraisana an-tanana (ohatra, ny tonian-dahatsoratry ny olombelona) sy ny fampiasana fitaovana rindrambaiko sasany izay hanome anao fivoriambe mahazatra (Grammarly no malaza indrindra). Na dia mety ho lehibe sy voafaritra manokana aza ny tonian-dahatsoratry ny olombelona, ​​dia mety ho lafo ny fitadiavana copywriter manokana ary be dia be ny asa azony atao.
SlayerAI no mpanampy tsara indrindra, indrindra raha ny tanjona dia ny hanatanteraka tsara ny fampielezan-kevitrao ara-barotra, tsy tapaka.
Iza no SlayerAI tsara indrindra?
SlayerAI dia fitaovana mahafinaritra ho an'izay manoratra kopia an-tserasera. Amin'izao fotoana izao, ny mpampiasa Slayer dia ahitana orinasa lehibe, orinasa madinika, masoivoho ara-barotra ary mpanoratra mpanoratra tsy miankina.
Maimaim-poana ny AI ampiasaina mandritra ny fotoana voafetra, ary afaka manampy avy hatrany amin'ny fanatsarana votoaty, ankoatra ny:
Manao herinandro fitsapana A/B ao anatin'ny minitra fa tsy volana
Fanamarinana tsipelina raha misy fiantraikany, fa tsy fitsipi-pitenenana
Fanaraha-maso kalitao eo noho eo ho an'ny mpanoratra kopia zandriny
Ny fanalahidin'ny fanoratana kopia tsara dia ny famaritana izay tian'ny mpihaino anao aloha, ary avy eo ny fampidirana ny marikao. Izany no nahatonga an'i Slayer namorona ny fahafahana misafidy amin'ny mpihaino kendrena am-polony; avy amin'ny olona liana amin'ny crypto, ho an'ireo liana amin'ny lamaody, hatsaran-tarehy, fahasalamana, fiara, fanavaozana trano sy ny maro hafa.
Ny AInay dia nosedraina fatratra niaraka tamin'ny vondrona kely mpampiasa beta, ary niavaka ny valiny. Na izany dia nanampy ny fanombohana hampitombo ny tahan'ny misokatra amin'ny 12% ka hatramin'ny 19%, na manampy masoivoho ara-barotra hitombo amin'ny famelana azy ireo handany fotoana kely hijerena ny asany.
Te hanoratra lohatenin'ny tranonkala tsara kokoa, andalana lohahevitra, lohatenin'ny bilaogy, kopia doka, lahatsoratra sosialy ary SMS? Ny Slayer dia nanarona anao tamin'ny lafiny rehetra.
Ahoana ny fiasan'ny SlayerAI?
Tsotra ny fampiasana Slayer, misoratra anarana fotsiny amin'ny kaonty maimaim-poana, midira, ary avy eo:
Fidio ny mpihaino kendrenao
Ampidiro ny kopia tianao homena isa, ary fidio raha mila soso-kevitra ianao
Tsindrio ny dingana
Dia izay! Raha tsy hitanao ny mpihaino kendrena tsara indrindra dia azonao atao ny mangataka vaovao aminay amin'ny alàlan'ny fampidinana eo amin'ny ilany havia amin'ny tranokala.
Ny isa hitanao dia ny isan-jaton'ny fahafahan'ny lahatsoratrao ho mahasarika be. Ny AI dia 80%+ marina, izay midika fa ny lohateninao dia hisarika ny mason'ny mpamaky anao matetika kokoa.
Inona no mitranga rehefa miparitaka be ianao?
Ny fanomezana ny vokatrao na ny serivisinao ny vintana tsara indrindra hiparitaka dia mety hanova be ny harenan'ny orinasanao. Izany no fahasamihafana misy eo amin'ny taonan'ny varotra sy ny fitazonana ny sata misy azy.
Ny vintana tsara indrindra amin'ny fitomboanao sy ny fandehananao dia ny fampiasana SlayerAI mba hahazoana antoka fa hahazo ny ankamaroan'ny ezaka ara-barotra ataonao ianao. Misoratra anarana izao ary mahazo 2 herinandro SlayerAI maimaim-poana tanteraka!
Misoratra anarana amin'ny fitsarana SlayerAI
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohiko mifandray amin'ny Amazon sy SlayerAI ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: kopia dokaaitahan'ny click-throughContent Marketingfanatsarana ny atinyFNTmailaka misokatraoptimization andalana lohahevitra mailakafanatsarana ny lohatenylohatenin-gazetyhampitombo ny ad ctrmampitombo ny tahan'ny click-throughhampitombo ny tahan'ny misokatra mailakamampitombo ny tahan'ny misokatrafanatsarana ny lohateny lehibempamono olonaOptimization andalana lohahevitra